Tuuryare “Ammaanka Muqdisho waxaa masuul ka ah maamulka gobolka Banaadir” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 28 February 2016 28 February 2016
Muqdisho: Kulan xalay ka dhacay Muqdisho oo looga hadlay ammaanka caasimadda Soomaalia ayaa lagu go’aamiyey in amaanka Muqdisho lagu ogaado maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha Ammaanka.
Kulanka oo ahaa mid deg deg ayaa waxaa ka qeyb galay oo shir guddoominaaye Taliyaha Ciidanka Nabad-sugidad iyo Sirdoonka Qaranka, Cabdiraxmaan Maxamuud Tuuryare, ku-simaha Guddoomiyaha Gobalka Banaadir, Saraakisha Hey’adaha Amniga, Guddoomiyeyaasha Degmooyinka Gobalka Banaadir iyo Agaasimayaal.
Kulankan oo socday saacada badan ayaa aad looga dooday in la balaariyo qorshayaasha lagu xoojinayo Amniga caasimadda.
Masuuliyiinti ka qeyb gashay kulankan Deg dega ah ayaa soo jeediyay iney diyaar u yihiin wax kasto oo looga hortagayo falalka Al-Shabaab maleegayaan.
Taliyaha qeybta Guud booliska ee Goabalka Banaadir, Sareeya Guute Cali Xirsi Bare “Caali Gaab” ayaa kulanka kadib Warbaahinta u sheegay in ammaanka gobalka Banaadir ay sii laba laabi doonaan.
Taliyaha Ciidanka Nabad-Sugida iyo Sirdoonka Qaranka, General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare oo ku hadlaayey Codka Taliyaasha Ciidamada Qalabka sida waxa uu Warfidiyeenada u sheegay in dhabarjab weyn uu ku dhacay Alshabaab, sida uu yiri.
Taliyaha Ciidanka NISA Ganeral Tuuryare ayaa sidoo kale sheegay in waxii haatan ka bilowda uu Maamulka gobalka Banaadir mas’uul ka yahay Ammaanka magaalada Muqdisho, isla markana ay awood u leeyihiin iney Howl galiyaan talisyada Booliiska iyo Nabad-Sugida ee qeybta guud Gobalka Banaadir.
Taliyaha ayaa sidoo kale tilmaamay in wixii hadda ka dambeeya taliyaasha nabadsugiddu beegsan doonaan goobaha Alshabaab ku suganyihiin, maamulka gobolka Banaadirna uu ka shaqeyn doono ammaanka caasimadda.
Qaraxyadii ALshabaab habeenkii Jimcaha ka geysteen Muqdisho ayaa sababay khasaare laxaad leh oo isugu jira naf iyo hanti, waxaana dhowr maalmood ka hor labo maalmiid weerarro hoobiye lagu qaaday xaafado ku dhow madaxtooyada Soomaaliya.